फुटपाथ पसलको बार्गेनिङ र एमाले पसलको बार्गेनिङ ! « Gajureal
फुटपाथ पसलको बार्गेनिङ र एमाले पसलको बार्गेनिङ !
प्रकाशित मिति: ८ भाद्र २०७८, मंगलवार ०९:५६
संस्थागत रुपमा नेकपा एमाले लगभग फुटिसकेको छ ! अर्को पार्टी दर्ता गरेर घरको साथीलाई देखाउने प्रयास भएको छ ! जुट्ने गुञ्जायस नभएको कुरा लेखाउने अभ्यास समेत रहेको छ ! उता, एकता अभियानका नेताहरु भन्दैछन् – ‘हामी नाडी छाम्दैछौँ, अलिअलि स्वास छ, बौरिहाल्छ कि भन्ने आश छ !’
संस्थापनपक्ष र बिद्रोहीका अतिबिधिपूर्ण गतिबिधि हेर्दा भने दुवैपक्ष एकताको आश र विभाजनको त्रशाको दोसाँधमा हल्ली रहेका छन् ! लाग्छ, अधिक नाफा कमाउने उदेश्यले फुटपाथमा सामान बेच्न बसेको ब्यापारी र सस्तो मुल्यमा राम्रो सामान किन्न आएको ग्राहकबीच मोलतोल चलि रहेको छ !
न व्यापारीले ग्राहकलाई तैंले हद दलाली गरिस्, तँलाई सामान बेच्दिनँ भन्न चाहन्छ, न ग्राहकले नै मागेजति रकम तिर्न मान्छ !
यसको अर्थ संथापन एउटा नाफाखोर ब्यापारी जस्तो र बिद्रोही समूह कञ्जुस, लोभी र गति छोडेरै दलाली गर्ने ग्राहक जस्ताे ! यता ग्राहकलाई पहिलो नजरमा आँखा परिसकेको सामान नलिई जाने मन छैन ! उता मौकाको चौका हान्न बसेको ब्यापारी मेरो गोरुको बाह्रैटक्का गर्छ, मिलाएर लैजा भन्दैन ! एउटालाई मज्जाले कमाउनु छ, अर्कालाई धित मर्नेगरी घटाउनु छ ! यस्तो बेला हुन्छ के त ?
सामान मन पराएको देखेपछी पसलेले मुल्यमा अड्डी कस्छ भने ग्राहक ‘यतिमा हुँदैन त ?’ भन्दै एकछिन हेरेर बस्छ ! पसले भन्छ- ‘लानु हुन्छ भने पाँच रुपैँया घारटाइदिन्छु, हुँदैन भने जानुस् ।’ ग्राहक थप्छ- ‘मैले भनेकोमा दिनुस् ।’ यसाे भन्दै रुपयाँ गन्छ ! कुरा मिल्दैन, पसले सामान थन्क्याउन भिंडछ, ग्राहक उठेर हिंडछ ! पसले ग्राहक गएतिरै आँखा लडाउँछ, दिन्छु झैं गरेर ग्राहकको आशा बढाउँछ ! ‘यहाँ सुन्नुस त, आउनुस त !’ ग्राहक आशाले फर्केर आउछ तर दाम घटाउनेवाला छैन, मूल्य बढ्दैन !
पसले- ‘पछुताउनु होला यस्तो सामान कतै पाउनुहुन्न !’ ग्राहक – ‘यहीमात्र दोकान होइन, तिम्रो मुल्यमा किन्नु छैन !’ यति भन्दै अगाडी बढ्छ, अलिक पर पुगेपछी, पसलेतिर फर्केर हेर्दै भन्छ ‘दिने हो ?’ ‘त्यो भन्दा बढी त तिर्दिनँ, अन्तिम पटक भन्दैछु, फेरी म सोध्दिनँ नि !’ पसले – ‘लगेर गोदाममा राखिन्छ तर त्यो मुल्यमा दिइन्न ! (गजक्क परे) सस्तो खोज्ने, कस्ता लाचारहरु पनि हुन्छन् ग्राहक पनि भन्दै पसलमा छिरेर थचक्क बस्छ !
छरछिमेकी दोकानेहरु इशारामा कुरा गर्छन् ! पसले र ग्राहक माथि आलोचना भर्छन् ! पुन: ग्राहक फर्केर आउछ, दोकान तिर आँखा लाउछ ! पसले नदेखे झैं गर्छ बाल दिदैनन् ! ग्राहक पसल कटेर अगाडी गएको देखेपछी पसले घाँटी तन्काएर ग्राहकलाई नियाल्छ, फर्केर हेर्ला कि भनेर, आफुले चाहेको दाम तिर्ला कि ठानेर ! यो गाइजात्रा देखेपछी छिमेकीहरु अचम्म मान्दै भन्छन् – ‘हैट, के सारो लालची ग्राहक र रकमी ब्यापारी परेछन्, लाजको पसारो !’